ny alatsinainy lasa fa nisy ny resaka nifanaovana tamin`ny arsevekan` i Douala, Msgr Samuel Kleda izay nilaza fa mahita ny fanafody fanefitra momba ny aretina “coronavirus”. Amin` ny alalan` ny fitsaboana nolovaina ihany koa ny fanafody hitan` ity mpitsabo “phytothérapeute” ity. Nanambara moa ny ministra fa hisy fitiliana atao mba hahafahana mamaritra ny dingana rehetra. Etsy ankilany, nilaza hatrany ny minisitra “camerounais” fa “handray olona hampifandray amin` i Madagasikara aho anio maraina (ndlr: omaly) mba hahafahana mahafantatra misimisy kokoa ny tambavy CVO”. Marihana hatrany fa mbola tsy nankatoavin` ny OMS ity fanafody ity. Saingy firenena maro sy manampahaizana ara-tsiantifika maro dia manohy hatrany ny fikarohana. Raha ny antontan` isa voaray, maherin` ny 800 ireo mararin` ny COVID-19 no sitrana amin` ny alalan` ny Chloroquine any Cameroun saingy tsy manakana azy ireo mitady fomba hafa hahafahana miady amin` izany.